युरोपबाट सिक्न नेपाल तयार छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १४, २०७६ अनुराधा पौडेल
फ्रान्स — युरोपमा अहिले कोरोना आतंक छ । स्वास्थ्यसेवा पाउनु नागरिक अधिकारभित्र पर्ने युरोपमा ठूलठूला संक्रमणहरु आउँदा भने स्वास्थ्य प्रणालीमा हलचल आउने रहेछ र कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दोरहेछ भनी छर्लङ्ग भएको छ ।
अरु त अरु युरोप आँफैले आँफैलाई पुग्ने मास्क पनि बनाउँदो रहेनछ । यति मानिस जन्मन्छन्, यति मानिस मर्छन् र यतिसम्म आकस्मिक सेवामा मानिसहरु आउँछन् भन्ने तथ्यांकलाई आधार बनाएर युरोपमा स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गरिएको रहेछ ।
तर, युरोपको यो आँकडामा कोरोना संक्रमणले व्यापक फेरबदल ल्याइदिएको छ । केही पनि तयारी नभएजस्तो अवस्थामा देखिँदैछ र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई सहाराविहीन अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।
युरोपमा कोरोना भाइरसको केन्द्रविन्दु हो– इटाली । इटालीको बक्ररेखा लगभग अहिले टुप्पोमा पुगिवरी तेर्सो लागिरहेछ । ठीक यही समयमा स्पेन र फ्रान्सको ब्रकरेखा ऽूत गतिमा उकालो लागिरहेको छ । फ्रान्समा कोरोना परीक्षण गर्ने कीटहरु अपुग रहेको भन्दै सरकारले व्यापक रुपमा कोरोना परीक्षण नै गरेको छैन । जतिजना बिरामी निश्चित भएर उपचारमा आए तिनको मात्रै दैनिक तथ्यांक सरकारले दिने गरेको छ । अहिले आएको तथ्यांकभन्दा कयौँ गुणा बढी कोरोना संक्रमितहरु फ्रान्समा छन् ।
युरोप पुरै ‘लकडाउन’मा छ । हरेक देशका नाकाहरु बन्द छन् । युरोपका यतिबेला कुनै पनि देश कोरोनाबाट अछुतो छैन र समाजमा एकखालको अनिश्चितता र भय मिसिएको छ । अक्सर शान्त परिवेश र शान्त खालको समाचार सुनिने युरोपमा अहिले कोरोना कोलाहल सुनिन्छ । अझ कोरोना संक्रमितहरु औषधि नै नपाएर अस्पताल पुर्‍याएकाहरु पनि चिकित्सकले छुनसमेत नपाउँदै भकाभक मरिरहेछन् ।
मर्नेहरु एक्लै अस्पतालमा मरेका छन् । युरोपमा मानिसको मृत्यु अस्पतालमा हुन्थ्यो र मृत्युवरण गर्दा परिवारका मानिसहरु साथमै हुन्थे । अहिले उनीहरुको मृत्यु वृद्धाश्रममा हुन्छ र रेखदेख गरिरहेका नर्स या स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तिम वाक्य छाडेर उनीहरु परलोकको यात्रा गरिरहेको दर्दनाक दृश्य टेलिभिजनमा देखिन्छ ।
मृत्युपछिको दाहसंस्कार परिवारका सदस्यका सट्टा सरकारले गरिरहेको छ । इटाली र स्पेनमा सेनाका ट्रकहरुमा भरेर मृतकहरुलाई जलाउन टाढा लगिएको छ किनभने चिहान घरहरुमा ठाउँको अभाव छ । मृत्युपछि चर्चमा प्रार्थनाका लागि कफीनहरु लाने काम बन्द भएको छ । फ्रान्सले त कोरोना संक्रमितबाट मरेकाहरुलाई जलाउने निर्णय गरेको छ ।
इटाली, स्पेन र फ्रान्समा मृतकहरु बढ्नुको पछाडि वृद्धाश्रमममा कोरोना भाइरस पुग्नु हो । भेनिस सहरमा भएको जात्रा नै कोरोना फैलने माध्यम बन्यो इटालीमा भने फ्रान्समा मलुज सहरमा रहेको चर्चमा सहभागीहरुको प्रार्थनासभा मुख्य कारण बन्यो ।
हरेक वर्ष युरोपले मौसमी रुघाखोकीको सामना गर्छ र मौसमी रुघाखोकीले पनि मानिसहरुको मृत्यु सजिलै हुन्छ । तर मौसमी रुघाखोकी नियन्त्रणको अवस्थामा रहने र अरुलाई सरे पनि घातक हुँदैनथ्यो । सरकार र नागरिक दुवैले यसलाई सामान्य रुपमा नै लिन्थे । तर, अहिले त यस्तो भयो कि एक देशले अर्को देशलाई सहयोग गर्‍यो भने आˆनो देशलाई नपुग्ला कि भन्ने डर देखियो ।
असल छिमेकीका नाताले जर्मनीले स्पेन र फ्रान्सका कोरोना रोगीहरुलाई आˆना अस्पतालमा उपचारको लागि ठाउँ दिएको छ । यसैगरी लक्जम्बर्गले फ्रान्सका र स्विजरल्यान्डले फ्रान्स र इटालीका कोरोना संक्रमितहरुलाई सेवा दिइरहेको छ ।
युरोपेली युनियनका दुई मुख्य खम्बा फ्रान्स र जर्मनीमध्ये जर्मनी अत्यन्त व्यवस्थित देखिएको छ । ठूलो संख्यामा जर्मनीले कोरोना परीक्षण गरिरहेको छ । उसले युवाहरुमा कोरोनाको संक्रमण ज्यादा रहेको र कम्युनिटी इम्म्युन सिस्टम बढिरहको पाएको छ । वृद्धाश्रमहरुमा कोरोना नछिरोस् भनी बहुतै ध्यान दिएको छ । त्यसैले जर्मनीमा कोरानाका कारण मृत्यु दर निकै कम देखिएको छ । जर्मनीले वद्धहरु मात्र जोगाएको छैन त्यहाँ व्यवस्थित सघन उपचार कक्षहरु अरु देशका भन्दा ज्यादा चुस्त र छरितो स्वास्थ्यकर्मीहरुको समूह राखेको रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ ।
इटालीलाई चीनबाट मद्धत भएपछि त्यहाँको कोरोना बक्ररेखा अब बिस्तारै झर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ तर स्पेनमा अवस्था दर्दनाक छ । २४ मार्चका दिन स्पेनको मेड्रिडमा रहेको एक वृद्धाश्रममा बहुतै हृदयविदारक अवस्था देखियो । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले मास्कसमेत नभेटेपछि रातारात कोरोनाले संक्रमित वृद्धाश्रम त्यतिकै छाडेर हिँडे र कोरोना संक्रमित वृद्धाहरु त्यहीँ भित्रै मृत्युवरण गर्न पुगे ।
पछि सेनाले हस्तक्षेप गर्‍यो र सेनाले नै वृद्धाश्रम रित्याउने र सरसफाइ गर्ने जिम्मा लियो । ठीक यही समयमा स्पेनका आकस्मिक कक्षमा मानिसहरु ठाउँ नपाएर भुइँमा सुतिरहेको र चिकित्सकको पर्खाइमा रहँदारहँदै उपचारै पाउन नसकेको कारुणिक दृश्य पनि देखिँदैछ । उता इटालीमा भने चिहान भरिएपछि यो चिहानमा मानिसको अन्तिम संस्कार हुन सक्दैन, कृपया अन्तै ठाउँ खोज्नुहोला भनी सूचना टाँसिएको सम्म देखियो ।
इटाली र स्पेनको जस्तै दर्दनाक अवस्था फ्रान्समा पनि आउन सक्छ भन्ने कुरामा फ्रान्सेली सरकार चनाखो बनेको देखिन्छ । यसैले फ्रान्स बचाउन सकिने संभावना रहेका कोरोना रोगीहरुका लागि औषधि परीक्षण गर्नतिर जबरजस्त लागेको छ ।
फ्रान्सको सरकारले लिएको यो निर्णयमा फ्रान्स भित्रकै विज्ञहरुले असहमति जनाए भने औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका वैज्ञानिकहरुले समेत तीव्र आलोचना गरे । यतिसम्म असहमति प्रकट भयो कि राष्ट्रपतिलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाह र सुझाव दिने समितिका बहुसंख्यक सदस्यहरुको मत बाझाबाझ भयो ।
यो समितिसँग फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको मार्च २४ मा दिनभरजसो प्रत्यक्ष बैठक भएको थियो । राष्ट्रपतिले उनीहरुको विरोधाभास मत सुने तर औषधिलाई परीक्षणमा लाने आˆनो निर्णय उल्टाउन टसमस भएनन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति यतिबेला आˆनै देशका संक्रामक रोग अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक दिदिए राउलोले दिएको सुझाव र निर्देशनको पालना गरिरहेका छन् ।
के फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले लिएको यो निर्णय सही छ ? आउने दिनहरुमा फ्रान्सले अपनाएको विधि के अरु देशले पनि अपनाउन सक्छन् ? आउने दुई हप्तामै यसको नतिजा थाह हुँदैछ ।
यस्तो कुन औषधि बजारमा उपलब्ध छ जहाँ फ्रान्सेली राष्ट्रपति संसारभरको विरोधको वावजुद कम्मर कसेर परीक्षणमा लग्न आतुर छन् ? यो दुई हप्तामै किन कम्तिमा पनि ८ सय फ्रान्सेली बिरामीमा यो परीक्षण गर भनेर प्रत्यक्ष निर्देशन दिएका छन् ? किन फ्रान्सेली सरकार फ्रान्ससहित जर्मनी, लक्जम्बर्ग, स्पेन र बेलायतमा समेत औषधी परीक्षण गर्न चाहन्छ ?
फ्रान्सेली सरकारको आँखामा परेको औषधि हो– मलेरिया रोगको नियन्त्रणमा यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको । क्लोरोकिन मल्टिपल ड्रग सिस्टम अपनाएर फ्रान्सको मार्सेइ सहरका सरकारी अस्पतालकै संक्रामक रोग वैज्ञानिक दिदिए राउलोले यसको सफल परीक्षण गरिसकेका छन् । उनले कम्तिमा २४ कोराना संक्रमित बिरामीहरुमा क्लोरोकिन र अरु थप तीन सहायक औषधिहरुको परीक्षण गरे र सकारात्मक नतिजा पाए । यो सकारात्मक नतिजा सरकारसामु प्रस्तुत गरे र यो औषधि नै कोरोनाविरुद्धको औषधिको विकल्प हो भनी दावी गरे ।
उनको यो रिपोर्ट बाहिरिएपछि नागरिकस्तरमा यस्तो उत्साह जाग्यो कि थप परीक्षण आवश्यक भए म पनि उपलब्ध हुन्छु भन्नेहरुको भीड लाग्यो ।
क्लोरोकिनले कोरोनाको फैलावट रोक्ने होइन । क्लोरोकिनले कोरोनाले गरेको संक्रमण घटाउने हो ।
फ्रान्सको आभनिर भन्ने स्वास्थसम्बन्धी एक बुलेटिनमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार यो औषधि यसअघि नै चीनमा करिब एक सय बिरामीमा परीक्षण भएको थियो तर चीनले यसको नतिजा सकारात्मक निकाल्न सकेन र यसको अध्ययनतिर नभुली एचआइभी एड्समा प्रयोग हुने एन्टिरेट्रो भाइरल उपचार प्रणाली प्रयोगमा ल्यायो ।
प्रोफेसर दिदिए चीनमा यसको सफल प्रयोग नहुनुमा डोज र योसँग अरु सहायक औषधिहरुको कम्बिनेसन नमिल्नु या प्रयोगमा नल्याइनु हुनसक्छ भन्छन् ।
मंगलबार बेलुका फ्रान्समा कोरोनासम्बन्धी प्रस्तुत गरिएको टेलिभिजन च्यानल एलसेइमा जानकारी दिइएअनुसार क्लोरोकिन अहिले संसारभर परीक्षण भइरहेको छ । कुनै पनि देशले यसको प्रयोगमा खुलेर अनुमति दिएका छैनन् किनभने क्लोरिकनले कोभिड–१९ को पनि उपचार गर्छ भनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छैन । त्यसो त क्लोरोकिनको साइड इफेक्ट मुटु, कलेजो र मृगौलालाई असर गर्ने खालको छ भनी वैज्ञानिकहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
क्लोरोकिनका साथसाथ एजिथ्रोमाइसिन र अरु थप दुई सहायक औषधिहरु परीक्षणमा लगेको फ्रान्स साउदी अरबले यसको प्रयोग गरेको सकारात्मक रिपोर्टबाट निकै आशावादी छ । इरान, भारत हुँदै इटाली, स्पेनदेखि अमेरिकामासमेतले यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । कुनै पनि देशका चिकित्सकले यसलाई सरकारी अनुमति पाइएला र चलाउँला भनी कुरेका छैनन् । फ्रान्समात्रै यस्तो देश हो जसले सरकारीस्तरमा परीक्षणको अनुमति पाएको छ, त्यो पनि चिकित्सकहरुको सघन निगरानी र सामूहिक निर्णयका आधारमा । कुनै पनि चिकित्सकले एकल निर्णयका आधारमा क्लोरोकिन सिफारिस गर्न मिल्दैन ।
आलोचनाका बाबजुद राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयलाई फ्रान्समा स्वागत पनि गरिएको छ । उनले जोखिम मोलेर बहुतै ठूलो निर्णय लिएका छन् ।
फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्रीका अनुसार क्लोरोकिनको परीक्षण कोरोना संक्रमित सबैमा हुने होइन । कोरोना संक्रमति ८५ प्रतिशत बिरामी स्वतः निको हुन्छन् । बाँकी बिरामी अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् । यिनै भर्ना भएका बिरामीमध्ये मृगौला, मुटु र कलेजोको रोग नभएका तर स्वास्थ दिन प्रतिदिन उच्च जोखिम्तर्फ धकेलिँदै गएका बिरामीहरुमा यो परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार क्लोरोकिन जम्मा एक हप्तामात्र दिइनेछ र दिनको २० मिलीग्रामभन्दा बढी डोज दिइने छैन ।
फ्रान्सबाट नतिजा आउँछ भन्ने पक्का चाहिँ छैन तर केही गरी आयो भने नेपालले पनि फ्रान्सको अनुसरण गर्न सक्छ । अहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणको लागि मेडिकल टीम बनाउन सक्छन् । कुन अवस्थामा औषधि प्रयोग गर्ने र कति डोज चलाउने भनी प्रोटोकल तयार पार्न सक्छन् किनभने नेपाललाई प्रोटोकल बनाउन केही हप्ताको समय बाँकी छ र कुन देशले के गरिरहेको छ सिक्न पाउने समय पनि छ ।
नेपालमा पनि क्लोरोकिनको उत्पादन हुन्छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल कम्पनीले क्लोरोकिनको उत्पादन बढाउन इच्छुक रहेको र सरकारलाई निःशुल्क मद्धत गर्न तयार रहेको भनी सबैका सामु प्रस्तुत भैसकेको छ । यदि नेपाल सरकारले बेलैमा उचित निर्णय लियो भने औषधि व्यवसायीहरुबाट मद्दत पाउन सक्छ । तर, यसका लागि फ्रान्सको परीक्षण कस्तो हुन्छ, यसको नतिजा भने हेर्नैपर्ने हुन्छ । प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ १३:२३
व्यापारीले पनि चार्टर्ड विमानबाट चीनदेखि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदै
चैत्र १४, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — सरकारसँगको पहुँचमा नरहेका तर कार्गो विमान चार्टर्ड गरिरर केही व्यापारीले चीनबाट कोरोना भाइस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम, उपचार तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरु आयात गर्ने भएका छन् ।
फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिकले आउँदो बुधबार त्यस्ता सामग्री आयात गर्ने तयारी गरेको छ । उसले कार्गो विमानबाट सामान ल्याउन इच्छा हुने व्यापारीहरुलाई बुक गराउन सूचना जारी गरिसकेको छ । अप्रिल १ मा चीनको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र सेन्जेनबाट सामान आयात गर्ने उसले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि आफ्ना सामान कार्गो जहाज चार्टर्ड गर्ने र त्यसमार्फत ल्याउन सामानको परिमाण बुकिङ गरिरहेको छ । एक किलोग्राम सामान ल्याउन ८ अमेरिकी डलर (९ सय ६८ रुपैयाँ) शुल्क लाग्ने जनाएको छ ।
अर्का एक व्यापारीका अनुसार अप्रिल ४ मा पनि अर्को यस्तै कार्गो विमान चार्टर्ड गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘नेपालमा सामग्रीको माग बढ्दै जाने र चीनमा पाउने हो भने अब यस्तो चार्टर्ड बढ्दै जाने छ,’ ती व्यापारीले भने ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको माग विश्व बजारभरि नै छ । त्यस्ता सामग्री खरिद गर्न सबै क्षेत्रका व्यापारीहरूको ध्यान चीनमै केन्द्रित छ । हाल नेपाली व्यापारीहरुले पनि चीनबाट मात्र सामान ल्याउन खोजिरहेका हुन् । ‘धेरै व्यापारीहरुले चीनबाट सामान ल्याउने चाहना राखेको देखिन्छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चीनबाट सामान ल्याउँदा सरकारी हवाई चार्टर्डमा सहजीकरण गर्ने भनेपछि अब केही दिनमा धेरै नै सामान आउनेछन् ।’
कोभिड–१९ रोकथाम, परीक्षण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि शनिबारदेखि चीनबाट ढुवानी हुने निश्चित भइसकेको छ ।
शनिबार सुरुमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजबाट त्यस्ता सामग्रीहरूको ढुवानी गर्ने जनाएको छ । आइतबार बिहानसम्म ती सामग्री नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए । त्यसपछि लगातार व्यापारीहरु आफैंले स्वस्फूर्त र सरकारी पहलमा थप सामग्रीहरुको ढुवानी पनि क्रमशः गर्दै जाने सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ १३:१७